Dadka jihaad doonka ah oo laga qabsaday deegaan muhiim ah oo Benghazi ka tirsan - BBC Somali
Dadka jihaad doonka ah oo laga qabsaday deegaan muhiim ah oo Benghazi ka tirsan
Image caption Billo ayuu dagaal ka socday deegaankan
Dagaalameyaasha jihaad doonka ah ee dalka Liibiya ayaa laga qabsaday mid ka mid ah goobihii ugu dambeeyay ee ay ku xoog badnaayeen ee magaalada labaad ee ugu wayn dalkaas
Xoogag daacad u ah taliyaha millatariga Field Marshal Khalifa Haftar ayaa sheegay in ay degmada Ganfouda ka saareen dagaalameyaashii jihaad doonka ahaa.
Aagaas ayay colaadi ka taagnayd muddo billo ah waxaana ka dhacay dagaalladii ugu xumaa oo lagu doonayay gacan ku haynta magaaladaas.
Qaar ka mid ah dagaalameyaashaas ayaa u xuubsiibtay uruka jihaad doonka ah ee Al Qaacidda.
Degmadan la go'doomiyay ayaa bartamaha magaalada u jirta sagaal mayl waxaana go'doon laga galiyay qaybaha kale ee magaalada Benghazi.
Xoogagan degmadaas qabsaday ayaanse aqoonsi ka haysanin xukuumadda Liibiya ee Qarammada Midoobay aqoonsan tahay.
Mareykanka oo joojiyay taageerada ciidammada Liibiya
Afhayeen u hadlay ciidammada Haftar ama ciidammada Bariga Liibiya ayaa sheegay in ay deegaankaas xoreeyeen, laakiin qaar ka mid ah malayshiyaadka ayaa u cararay aag u dhaw oo loo yaqaanno "12 blocks".
Weriyaha BBC-da uga soo waranta Waqooyiga Afrika Rana Jawad, waxay leedahay qabsashada degmada Ganfouda ayay ciidammadu u arkaaan "guul muhiim ah" laakiin dadkii deegaanka ayay arrintaasi dhibaato wayn ka soo gaartay.
Waxay intaas ku dartay "in ay saamayn xun laga dhaxlay dagaal labo sano ka socday magaalada labaad ee ugu wayn dalkaas".
"Dad badan ayaa ku dhintay kumannaan dad ah ayaana ku barakacay gudaha magaaladaas".
Dadka deegaanka ayaa BBC u sheegat in malayshiyaadka jihaad doonka ah ay wali maamulaan qaybo ka mid ah bartamaha magaalada Benghazi, inkastoo aysan dagaalo ka dhigan halkaas wakhtiyadan dambe.
Residents told the BBC that Islamist militias still control some parts of central Benghazi, though there have been no clashes there recently.
Liibiya ayay xasilooni darri ka jirtay tan iyo markii la riday Mucamar Qadaafi sanadkii 2011kii